IINGCAMANGO ZALE MIHLA ZANGAPHANTSI (ISIKHOKELO SOYILO) - IINGCAMANGO ZEGUMBI LOKUPHILA
Eyona Iingcamango Zegumbi Lokuphila Iingcamango zale mihla zangaphantsi (Isikhokelo soYilo)
Iingcamango zale mihla zangaphantsi (Isikhokelo soYilo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sezimvo zangoku zangaphantsi kubandakanya ukusetyenziswa njengebhari, igumbi lokulala, igumbi lomdlalo kunye negumbi lokuhlala. Amagumbi angaphantsi ngamagumbi axakeke kakhulu endlwini, ixesha elininzi lihlala kwizinto ezingafunekiyo kunye nezixhobo ze-DIY ezisetyenziselwa imisebenzi encinci. Ngamaxabiso eepropathi anyukayo kwaye abantu bathatha isigqibo sokwanda ngaphakathi kweendonga zabo esele zikhona kunokugqithisa kuhlahlo-lwabiwo mali, ayimangalisi into yokuba bafumana uhlengahlengiso!
Nokuba indawo eyongezelelweyo iyafuneka kwimpelaveki yokonwabisa okanye yokuphila kwansuku zonke, apha ngezantsi unokufumana izimvo zangoku zokuba wenze okungakumbi kwigumbi lakho elingaphantsi, kunye neengcebiso malunga nendlela yokufikelela kwezona ziphumo zibalaseleyo.
Uyilo lwale mihla
Indawo yangoku yeBar
Igumbi lokuPhila langoku
Igumbi leMidlalo eliPhantsi langoku
Igumbi lokulala kwigumbi langoku
Igumbi laMabhayisikobho lale mihla
Imibala yepeyinti yangaphantsi yangoku
Ukuhombisa amagumbi angaphantsi kwale mihla
Iingcebiso zangoku zokuhlaziya kwakhona isiseko
Nantsi igalari yethu yeentlobo ezahlukeneyo zoyilo ezingaphantsi ezinentlobo ezahlukeneyo zokuyilwa kwegumbi kunye nokusebenza.
Kwigumbi elingaphantsi komhlaba lendlu, ibha yasekhaya yangoku inokuba yeyona ndawo yokonwaba, kuba sele kukhanyisiwe. Ukufakwa kwesinki kuya phambili ngqo njengoko imibhobho ihlala ihleli ikho, kwaye okoko nje kusenziwa ubushushu, inyathelo elilandelayo ngumbala kunye nezinto ezibonakalayo. Sebenzisa izibane zomsebenzi ukwenza i-ambiance, kwaye uyidibanise nezinto ezibonakalayo, ezifana nobhedu okanye ubhedu, ukwenza ibha yasekhaya yesiqhelo yiva umhle kwaye uphakama.
Ukuba ujonga into elungele usapho, bhangqa ngezi sofas ziphantsi kunye netafile yekofu enendawo yokugcina imidlalo yetafile; bopha ukujonga kunye ngokudibanisa iindawo ezinzima zebar kunye netafile kwaye uye kwinto ecocekileyo kunye neklasikhi enje nge-marble top.
Ukulungiselela useto lwabantu abadala, izitulo zebar zomthi kunye neendonga ezinombala we-teal, khwaza ubutofotofo kwaye uphumle, ngelixa ungowangoku kwaye kulula ukuwagcina.
Ibha yangoku yangaphantsi kwebar yentsimbi nekhabhathi yentsimbi kunye nesiqithi esinezitulo zebar.
Imvelaphi JR Ukuphila ngokwesiko
Ukukhanya kwe-LED kunokuba yenye indlela yokufumana isitayile sangoku phantse kulo naluphi na uhlobo loyilo lwegumbi.
Ibha yangaphantsi yangoku enewayini yokugcina iwayini.
Nokuba yeyiphi indlela eyamkelweyo, igumbi lokuhlala kufuneka licoceke, livumele ugcino oluthile, kwaye libe nesibane esifanelekileyo sokuphumla. Yenza imfudumalo ngokukhetha umgangatho womthi omnyama, njengemaple, emva koko uyigalele ngekhaphethi etyebileyo yokwenza ukuthungwa; khetha isofa ebunjiweyo eyi-L okanye yongeza i-ottoman yokuphumla kunye nokugcinwa okufihliweyo.
Igumbi lokuhlala elinodonga lweti kunye indawo yokubasa igesi .
Ingaphakathi lale mihla elinendawo yomlilo emarmore kunye nomgangatho okhanyayo womthi.
Imiqamelo enemiyalezo emininzi nengubo igqibezela ukujonga; yiya ngombala weorenji otshisiweyo, ubhangqwe ngomnwe wekhrimu kunye noluhlaza okwesibhakabhaka kwaye uvumele iindlela ezahlukeneyo zokwenza ezinye.
Bopha inkangeleko ngokubeka isibane somgangatho kunye nemithombo yokukhanya emininzi kwicala langoku isofa yecandelo ; Oku kuyakuvumela ukuba ukhethe izibane ofuna ukuzisebenzisa kunye nomoya ofuna ukuseta.
Xa usebenzisa igumbi lomdlalo, indawo yokuhamba sisiseko, ngenxa yoko kunyanzelekile ukuba kugcinwe. Udonga olunemibala iiyunithi ezixhonyiweyo zivumela ukuqokelela imidlalo, ukuxhoma iintonga zekhonkco kunye nokufihla inkqubo yomculo ngelixa ungahlali kudonga lonke; oku kwenza ukuba igumbi libukeke likhulu, njengoko iliso lisenokubona udonga lwangasemva ngelixa lihombisa ngaxeshanye.
Khetha Umgangatho ongaphantsi eboniswe kwiiplanga kwaye uye kwimathiriyeli ebalaselisa umdlalo owudlalayo, njenge-oki.
Igumbi lokugqibela lomdlalo lifuna indawo yokubeka iziselo kunye nokutya okulula ngaphandle, ke ngoko yakha itafile yebar ecaleni kodonga olukufuphi nendawo yokugcina kunye neshelufu ende ebhityileyo kwaye ubonise ngaphezulu kwayo umfanekiso webhola oyithandayo kwibhokisi yevinyl ebuyiselweyo. Ambiance, intuthuzelo kunye nendawo ecingelweyo, konke ngochukumiso lwangoku.
Utshintsha njani ngokusemthethweni igama lakho kwi-nc
Igumbi lomdlalo elinetafile ebhodini kunye negumbi losapho.
Kuyaziwa ukuba ukongeza igumbi lokulala elongezelelekileyo ekhayeni lakho kunganyusa ixabiso kodwa kunokukuvumela ukuba uhlale kwindawo oyithandayo ngaphandle kokufudukela kwindlu enkulu. Yenza igumbi lokulala ngokucinga kuqala malunga nokufudumala kunye nokuqina, njengoko ezo zezona mpawu ziphambili zilahlekileyo kwigumbi elingaphantsi.
Qala ngokukhetha umbala oqinileyo womthi okhuni okanye okhaphethi kwiitoni zokhilimu kwaye ungeze imithombo emininzi yomsebenzi kunye nokukhanyisa ngokubanzi, ukwenza igumbi elingaphantsi livakale lilula kwaye lingaphantsi komhlaba. Yiya kwifenitshala eluhlaza emthubi natyheli ngelixa ifanitshala eyenziwe ngomthi enemibala emhlophe e-cottage iya kuqinisekisa ukuba igumbi liziva lilihle kwaye lamkelekile.
Inyathelo lokuqala xa usenza igumbi lomdlalo bhanyabhanya kukubona esona sikrini sikhulu ngobukhulu esinokulingana namava aphezulu; Ukukhetha enye inkulu kakhulu okanye incinci kakhulu yenza ukuba umbukeli azive engonwabanga kwaye igumbi lisenokungasetyenziswa kwakamsinya.
iintombi ezitshatileyo ezingabizi kakhulu kunye nobukhulu bazo
Emva kokuthatha isigqibo sokuba yeyiphi eyona ndawo ifanelekileyo yokubeka ikhusi kunye nenkqubo ejikelezileyo, khetha isihlalo esilala phantsi esihlalweni, iipilo ezininzi kunye neyunithi yeTV evumela ukugcinwa, njengoko unokufuna ukongeza amanqaku kwixa elizayo.
Iyunithi eneemigca ye-skirting ye-LED inika umlinganiswa ngelixa uqinisekisa ukuba umntu unokukhangela indawo ngaphandle kokukhanyisa isibane ngexesha lasebusuku bhanyabhanya.
Njengoko amagumbi angaphantsi ahlala enziwe ngesithuba esinye esikhulu, isitshixo sokwenza imimandla kunye nokugcinwa kweMithetho kaMasipala kukwahlula amagumbi; gxila kwezi ezineendawo zokufikelela ezishelifini ngaphezulu, ukuvumela iliso ukuba lihambe kuzo ukunika umbono wendawo, kunye nokugcina okuvaliweyo ezantsi ngasese.
Njengoko iindawo ezininzi kufuneka zifezekiswe, yenza ezimbini eziphambili, nganye ineenjongo ezininzi. Ukuba kungabakho ukukhanya kwendalo okuzayo, khetha elona cala likhanyayo kwigumbi lokutyela elinekhitshi; Gcina ifanitshala imhlophe kwaye ukhethe imibala efanelekileyo yefanitshala, enje ngeekorale, isage kunye nokhastadi. Ukuqhubeka, gcina iphalethi efanayo kwigumbi lokulala, ngelixa usongeza amalaphu atyebileyo, afana nevelvet yokufudumala.
Indawo yokuzivocavoca yasekhaya yangoku
Kuxhomekeke kwinjongo yegumbi lakho elingaphantsi, imibala eyahlukeneyo inokukhethwa. Kwiindawo ezikhulileyo, ezinje ngemivalo kunye neendawo zokuzonwabisa, khetha i-emerald, umbala omnyama oluhlaza okwesibhakabhaka kunye noboya basezidolophini njengeempawu, ngelixa uphakamisa ezinye iindonga ngombala ongwevu. Khanyisa indawo ngombala otyheli okanye we-mint eluhlaza kwaye ube nesilingi kunye nokumhlophe okumhlophe, kwimigca ecocekileyo yanamhlanje yokuziva ngakumbi kwigumbi losuku.
Njengoko igumbi elingaphantsi liyinto encinci ekhanyayo yendlu, soloko ucinga ngenjongo yokugqibela yayo; dlala ngokuthamba kunye nokukhanya kwaye ugcine kulula, ukufezekisa ubunewunewu obungaphantsi kweli xesha langoku. Ukuba igumbi lahlulwe langamacandelo amaninzi, khetha iskimu sombala kwaye uqhubeke nayo, ukongeza ubunzulu ngokusebenzisa izinto ezahlukeneyo kunye neepateni.
Imvelaphi Uyilo lweSaiman
Yizisa ukuthamba kwigumbi elingaphantsi kunye neesofa ezinzulu, izitulo ezihleli phantsi kunye nezitulo eziphakanyisiweyo, ngelixa ukhetha iitafile zekofu zemigca kunye nejometri, iiyunithi zeTV kunye nokugcinwa. Cinga ngentuthuzelo yanamhlanje kunye nokusebenza.
Eli khitshi langoku langaphantsi lisebenzisa ikhabhathi yodonga engapheliyo kunye nesiqithi kwiimfuno zayo zokugcina. Nokuba yeyiphi na injongo yokugqibela yegumbi elingaphantsi, ukugcinwa kuyisitshixo kwaye kufuneka kube lula ukufikelela kuko, kungabi nzima kakhulu kwaye kusetyenziswa okuninzi ukugcina indawo; kuba eli gumbi alikho kumgangatho ofanayo nabanye, yonke into efunekayo kufuneka igcinwe kwi-loco ukuthintela ukunyuka nokuhla kwezinyuko.
Ukuma kweeshelufu ezimileyo ezahlula isithuba, ii-ottomans ezinendawo yokugcina efihliweyo kunye neekhabhathi ezijikayo ezineminyango yokutyibilika ziya kwenza indawo leyo ibe lula ukuyisebenzisa, ihlala ixesha elide, kwaye ihlaziyiwe.
Phambi kokuqala iprojekhthi yakho yokuhombisa igumbi elingaphantsi, qinisekisa ukuba kuthathwe onke amanyathelo okhuseleko ukuze indawo ikhuseleke kwaye kulandelwe imigaqo yokwakha.
-Ukujonga ukuphakama kwesilingi yakho kuyahlangabezana neemfuno ezifunekayo kwigumbi lokuthathwa njengendawo yokuhlala; Iindawo ezininzi ziya kufuna ukuba uphume emlilweni kwaye unokufuna ukubeka ezinye iindlela zokuthintela ngaphambi kokuba kuqalwe ukuhombisa.
Iifeksi zoboya ezisongela oomolokazana
Nje ukuba izimvo zakho zangaphantsi zangoku zikhathaze zonke iimfuno zomthetho nezokhuseleko, cinga ulwakhiwo:
-Qala ngemibhobho yamanzi kunye nokufaka iintambo kwaye ukuba uyayifuna, usambathise isandi; La ngamanyathelo okuqala ekufuneka uwathathe ukuba ufuna ukunqanda naziphi na iingxaki kwixesha elifutshane nelide. Ukuqala ngesiseko esomeleleyo sisitshixo kwiprojekthi yokuhombisa ngempumelelo.
- Amanqanaba okufuma anokuba phezulu kakhulu kumagumbi angaphantsi, ke jonga ukogquma ngakumbi igumbi kwaye wongeze inkqubo yokucoca umoya kunye ne-dehumidifying system; oku akuyi kwenza kuphela ukuba ubomi bube lula ngakumbi kodwa konke ukuhombisa kube yimpumelelo, njengoko ukutyabeka, ipeyinti kunye neglu kufuneka zome.
-Ukuba uneewindows okanye ufuna ukongeza ifestile kakuhle, qinisekisa ukuba amanyathelo okhuseleko asendaweni; Ngoku uhlobisa kwakhona eli gumbi, ngekhe ulitshixe kwindlu yonke, ngenxa yoko le migaqo kufuneka yongezwe ukuze ube noxolo lwengqondo.
Nje ukuba ukwinqanaba lokuhombisa, cinga ngamanqanaba:
- Emva kokuba umsebenzi wesakhiwo ugqityiwe, qala ezindongeni nasemgangathweni ngaphambi kokuzisa enye into; awunakufikelela ngqo egadini okanye kwamanye amagumbi asuka kumgangatho ongaphantsi, ke zishiyele indawo eyaneleyo ukuze usebenze kamnandi.
- Musa ukoyika umbala! Kulula ukuya kwimibala ekhanyayo ye-monochrome xa ukuhombisa indawo engaphantsi esoyika ukuba kunokuba mnyama kakhulu, kodwa oko kuya kuba nefuthe elichaseneyo. Ukukhanya kunye nokuqaqamba kudlala indima enkulu ekuhombiseni, ke beka imibala oyithandayo kwiipateni ezahlukeneyo kunye noburhabaxa kwaye uvumele imithombo yokukhanya nganye ukuba ikhanyise indawo.
-Kwiimbono zangoku zangaphantsi, izibane zomsebenzi ngumhlobo wakho: njengakwelinye igumbi lendlu, ukusetyenziswa kwemithombo yokukhanya emininzi kuya kukunceda wenze ii-mood ezahlukeneyo ngamaxesha ahlukeneyo ukuze uzisebenzise ngokupheleleyo zonke iindawo oziyileleyo, Nokuba ufuna ukufunda incwadi okanye unetheko elikhulu lokuzalwa.
Ndwendwela le galari ukuze ufumane ezinye ezinxulumene noko ugqibile izimvo ezingaphantsi .
Malunga no-Elena Padovan
U-Elena wafunda uyilo lwangaphakathi eLondon kwaye unomdla omkhulu kwimpembelelo yengqondo yoyilo, kubandakanya ubudlelwane phakathi kwezinto, indawo nabantu; Ukholelwa kuyilo olunenjongo engaphaya kobuhle kwaye uyibona njengendlela yokwenza ubomi bube ngcono.
ilokhwe yomtshato emhlophe negolide
ilokhwe enye yeendwendwe zomtshato
uya kuba yintsika yam yozuko
Iingoma zomtshato weR & b
zingaphi isicakakazi seembeko onokuba nazo